Ahoana ny fomba hamolavolana sary logo amin'ny Adobe Illustrator tsikelikely | Famoronana an-tserasera
Rehefa mamorona sary famantarana marika izahay tsara ny mitazona kinova vector famolavolana. Raha ny mahazatra, ny logo dia tsy maintsy ampiharina amin'ny endrika sy habaka samihafa, ary tsy mitovy ny manisy tombo-kase azy amin'ny valopy raha tsy amin'ny marquee. Raha manana logo fotsiny isika amin'ny bitmap dia manana ny risika isika fa rehefa mampiasa azy amin'ny habe lehibe dia ho hita ireo pixel. Raha izany no anao dia tsy maintsy mamaky foana ny lahatsoratra ianao satria holazaiko anao Ahoana no ahafahanao manamboatra sary miavaka amin'ny Adobe Illustrator.
Ho hitantsika ohatra roa, hamorona ny kinova vektor an'ny logo noforonina tao amin'ny Adobe Photoshop izahay ary ny kinova nomerika an'ny sary famantarana an-taratasy.
1 Ahoana ny fomba hanaingoana sary famantarana amin'ny Illustrator avy amin'ny sary
1.1 Mamorona artboard sy Illustrator vaovao
1.2 Manaova sary am-panarahana sary ao amin'ny Illustrator
1.3 Ahoana ny fanovana ny logo anao
1.4 Ampio ny marika
1.5 Safidy hafa: ampiasao ny fitaovana penina
2 Ahoana ny fomba hananganana sary famantarana ny sary miavaka amin'ny Photoshop
2.1 Mamorona artboard vaovao
2.2 Manaova fanarahana sary amin'ny Illustrator
2.3 Ovao ny lesoka logo amin'ny Illustrator
2.4 Safidy hafa: ampiasao ny fitaovan'ny endriny sy ny fitaovana penina
Ahoana ny fomba hanaingoana sary famantarana amin'ny Illustrator avy amin'ny sary
Mamorona artboard sy Illustrator vaovao
Izaho dia nanao sary tamin'ny sarin-taratasy ary nalaiko sary. Handeha isika mamorona artboard ao amin'ny Illustrator, nomeko habe A4 ary novako ny loko loko mankany RGB.
Manaova sary am-panarahana sary ao amin'ny Illustrator
Apetaho eo amin'ny solaitrabe ilay sary, safidio izy ary manaova "sary mitsivalana". Matetika tsy hita io fitaovana io, fa afaka jerenao eo am-baravarankely> fanarahana sary. Araka ny hitanao dia manome safidy maromaro ianao. Tsy misy izay mandeha foana, ka mila manandrana ianao. Raha ny logo dia miasa tsara matetika izy ireo: logo amin'ny mainty sy fotsy, silhouette na aloky ny volondavenona. Raha izany dia, hifikitra amin'ny sary famantarana mainty sy fotsy izahay.
Ahoana ny fanovana ny logo anao
Raha vantany vao nahavita ny fanarahana ianao dia hanana kinova vector an'ny sary famantarana. Mba hanovana azy dia mila mankany amin'ny vakizoro object> manitatra ary miaraka amin'ny fitaovana fifantenana mivantana Azontsika atao ny manohina ny daroka tsirairay, manova ny hateviny, manova loko, manala ny ampahany ary manitsy ny lafiny rehetra izay tsy maharesy lahatra antsika ny logo.
Ampio ny marika
Handeha isika ampidiro eto ambany ny sary ny marika. Nisafidy ny Typografia futura ary nomeko azy a Habe 27 teboka. Aza adino ny manamarina fa ny singa rehetra amin'ny logo dia mifanaraka tsara. Raha tsy hita ny fitaovana fampifanarahana hita dia azonao jerena ao amin'ny vakizoro.
Safidy hafa: ampiasao ny fitaovana penina
Araka ny hitanao, na dia efa miatrika kinova nomerika aza isika, dia manohy manamarika fa sary freehand izy io. Tsy ratsy izany, raha ny marina dia azo atao ny mitady fomba. Fa raha tsy te hitazona ireo karazana tsipika ireo ianao, azonao soratana amin'ny tanana foana. Ampiasao ny sary fitadiavana inona no nataontsika? toy ny fototra, omeo loko maivana be izy ary miaraka amin'ny fitaovana penina mandehana mamerina ny kapoka etsy ambony.
Ahoana ny fomba hananganana sary famantarana ny sary miavaka amin'ny Photoshop
Amin'ity ohatra hafa ity dia manana sary famantarana izay noforoniko tao amin'ny Photoshop izahay. Ny lesoka amin'ny famolavolana logo miaraka amin'ny Adobe Photoshop dia ity dia rindrambaiko sary tsotra, izany hoe, miasa amin'ny piksel ianao. Rehefa mamolavola ny logo amin'ny bitmap dia mety hanome antsika olana amin'ny famahana izany rehefa ampiharintsika amin'ny sehatra midadasika.
Mamorona artboard vaovao
Handeha isika mamorona artboard miaraka amina toetra mitovy amin'ilay teo aloha (habe A4, maody miloko RGB) ary izahay dia hanao sokafy ao amin'ny Illustrator ny sary famantarana.
Manaova fanarahana sary amin'ny Illustrator
Hitovy ny fizotrany. Hisafidy ny sary famantarana ary hanao dian-tsary izahay. Amin'ity tranga ity ny safidy mety indrindra dia "Silhouettes", na dia hitanao aza, ho very ny antsipiriany sasany momba ny logo, toy ny loko, ary ho simba ny typografia.
Ovao ny lesoka logo amin'ny Illustrator
Andao ho any amin'ny object tab ary kitiho ny fanitarana. Miaraka amin'ny fitaovana fifantenana mivantana, handeha izahay esory ny marika ary hanampy ny sary miaraka amin'i Illustrator izahay, nofidianay ny Karazan-tsoratra italic Light Raleway ary homenay ianao a Habe 35 teboka. Ampifanaraho tsara ireo singa rehetra ao amin'ilay logo ary omenao vonona izany.
Safidy hafa: ampiasao ny fitaovan'ny endriny sy ny fitaovana penina
Tahaka ny nataontsika tamin'ny sary famantarana voalohany, afaka mamorona kinova vaovao miaraka amin'ireo fitaovan'ny programa isika. Ampiasao ny fitaovan'ny penina hanoritana ireo tendrombohitra sy ilay fitaovana ellipse ho an'ny faribolana.
Raha tianao ity fampianarana ity momba ny fomba hananganana sary famantarana sary amin'ny Adobe Illustrator sy Te hahafantatra bebe kokoa ianao amin'ny ny fomba fanaovana sary vongana sary ao amin'ilay programa aza adino ny lahatsoratra ilaozako mifandray aminao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » Fitaovana famolavolana » Ahoana ny fomba hanaingoana sary famantarana amin'ny Adobe Illustrator